Burmese subtitle for Lunch-N-Net | Ep 11 (S2): "The One About Autism and Developmental Delays" | subtitlesdownloader.com
ကိုယ့်ရီ dat နှင့်အတူ luncheonette ၏အခြားဇာတ်လမ်းတွဲမှကြိုဆိုပါတယ်
ကိုယ်သင်ဤဇာတ်လမ်းတွဲ Alin ရောက်စေဖို့တကယ်စိတ်လှုပ်ရှားတယ်
သူကအလယ်ဗဟိုအထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာနှင့်ဆက်စပ်မသန်စွမ်းမှာ u_s_ နှင့်အတူရှိပါတယ်
ကျနော်တို့တိုက်ရိုက်လွှကနေမကြာသေးခင်ကဗီဒီယိုများကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကသော့ချက် p ဈပါတယ် florida website တွင် posted
ဒါကြောင့်သူကကျွန်တော်တို့ကိုပြောနေတာရဲ့အတွင်းရေးမှူး Wilkinson ဖြစ်ပါတယ်ဒွါဒသမကျွန်တော်တို့ဇှနျလအပေါ်ပြုအဖြစ်အပျက်
ထိုမွေးစားစောင့်ရှောက်မှုဒီဇိုင်းအသစ်ဥပဒေနှင့် ပတ်သက်. နှင့်အကောင်အထည်ဖော်ဒါများအတွက်
ထိုအရပ်၌ ပတ်သက်. အချို့သောကြီးမြတ်သတင်းအချက်အလက်နှင့်အံ့သြဖွယ်သတင်းဒီထွက်စစ်ဆေးနိုင်
ဒုတိယကျနော်တို့ florida ပြည်နယ်မွေးစားသွား၏အံ့ဖှယျပျော်မွေ့ခဲ့
မွေးစားမိဘများ Orlando တွင် ciation ညီလာခံအဘယျအကွီးစှာသောအချိန်နှင့်စံချိန်ပွောဆို
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website တွင်အလွန်မကြာမီပို့စ်တင်ခံရဖို့သွားကြသည်
ကျွန်တော်တို့ uh ဒါကြောင့်သူတို့အတက်ထားနိုင်ပါတယ် ... ငါတို့သည်သင်တို့ကြောင့်ပျော်မွေ့နှင့်တွေအများကြီးရနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်
သငျသညျအုပ်ချုပ်ရေးမှူး Rick Scott မွေးစား-စောင့်ရှောက်မှုအသက်အရွယ်နှစ်ဆယ်တယောက်တိုးချဲ့ဥပဒေကြမ်းလက်မှတ်ရေးထိုး
ဒီ uh ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနှစ်ပေါင်းအပေါ်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးတဲ့အရာတစ်ခုခုသည် ... အ
စောင့်ရှောက်မှု january ပထမဦးဆုံးနှစျထောငျကစတင်ခဲ့သည်သောအစီအစဉ်တဆယ်လေးယောက်၏ extension ကို
သူတို့ကိုတသီးပုဂ္ဂလဖို့လမ်းအောင်မြင်ဖို့ကူညီပေးဖို့ထောက်ခံပါတယ်နှင့် aftercare နေဆဲ
နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များနှင့်အတူ website ကိုဝင်ရောက်လာခဲ့သည်ဇယားဒီမှာထဲမှာ posted ဖြစ်ပါတယ်
ထိုသို့ဖြစ်လာသကဲ့သို့ uh ... ကျွန်တော်တို့့သင်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များဆောင်ခဲ့ရမည်င်
ကိုယ့်ကျနော်တို့၏သမိုင်းမှာကာလ၏အကျိုးကျေးဇူးစာရေးတံ ချ. ဝေရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးမိဘများကမကထ
ယေဘုယျကြည့်ရှုမယ့် kinda ပေးကတိပေး
uh ... တစ်ပါတ်
နှစ်ပတ်အတွင်းအချိန်များအတွက်တကယ် kinda လွန်း acclimate မှ
ကောက်ချက် Pete ron အကြောင်း
တကယ့်ကိုကြင်ကြင်နာနာ၏ကလေးသင်ယူဖို့အတှကျ un အခွင့်အလမ်းပေးခြင်းအပေါ်
uh မှ ...
မကြာခဏဆိုသလို tutti ပိုပြီးခမ်းနားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်
အွမ် ... တခါတရံတကအကျပ်အတည်းခွအေနအေဖြတ်ပြီးဖြစ်စေခြင်းငှါ
uh ... သီးခြားထား
အဘို့အလို့ငှာအချိန်ရဲ့ aa နည်းနည်းယူ
uh ... တစ်ခုခုကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း
ဖွံ့ဖြိုးမှုနှောင့်နှေးပထမဦးဆုံးအပေါင်းတို့၏ကိုယ်ယူသှားနိုငျတဲ့ resource ရှိပါတယ်
နှောင့်နှေးဈကြည့်ဖို့သွားနှင့် ok ဒီမပြောသင့်ကြောင်းအချို့အရပ်ဖြစ်ပါသည်
ကျွန်တော်တို့ uh အပြင်ဘက်တွင်တစ်ဦး၏ကိုရှာဖွေ ... သေချာပေါက်အသက်အရွယ်ရှိပါတယ်တခါ
ကိုယ့်လုပ်နိုင်ကောင်းစွာတ uh တွေအများကြီးရှိပါတယ် ... စစ်ဆေးရမည့်စာရင်းနှင့်မေးခွန်းလွှာ
uh ... မိမိတို့အဘို့
အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ် kinda ပြောပြရန်တစ်ဦးတစ်ဦးရည်မှန်းချက်လမ်း
စံစိစစ် tool ကို
ကလေးတစ်ဦးလဲကျစေခြင်းငှါ, ဘယ်မှာအွမ် ... နေရသည်
အပေါ်အွမ် ... အခြားသယံဇာတ
အွမ် ... အချို့ကိုရိုက်ထည့်ရှိ၏
uh ... အတွက်
ဆီး hillsborough ခရိုင်ဝိုင်း
uh ... အတွက်ခရိုင်ကိုဖြတ်ပြီးအမျိုးမျိုးသောနေရာများအနှံ့
သူတို့ပတ်ပတ်လည်မျက်နှာပြင် valuating နိုင်
လေးမွေးစားမိဘများနှင့်အခြား uh ... စောင့်ရှောက်သူများနှင့်ပံ့ပိုးပေး
ပြီးတော့နောက်မှာ process ကိုဘယ်မှာအရပ်ဌာန၌လည်းရှိရဲ့
ပိုပြီးတရားဝင်ရောဂါရှာဖွေစမ်းသပ် uh ... ကြောင်း uh လို ...
သငျသညျမွေးပြောပြနိုင်ကြောင်းသယံဇာတများသို့မဟုတ်ပင်အချို့သော tipster နည်းစနစ်အပေါ်အချို့သော
မသန်စွမ်း၏ဒြပ်စင်၏ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများနှင့်အတူ keys တွေကိုအများကြီးများအတွက်
ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ဖြစ်ရပြီသွားမယ့်အဘယျသို့ကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့အွမ် ... စွမ်းရည်
အ CDC နိုင်ရန်အတွက်
uh ... မိသားစုပစ္စည်းပစ္စယနှင့်အတူအလုပ်လုပ်
ဖို့အရမ်းကြင်နာ၏မကြာခဏဆိုသလို uh ... ထိုမသန်စွမ်းသက်ရောက်မှုဟာသူတို့ရဲ့စွမ်းရည်
အပြုအမူတွေကိုအမူအကျင့် Axel နှင့် raha ဒါကြောင့်ကြောက်လန့်ကိုစလှေတျစားဆင်ယင်ရှပ်အင်္ကျီထုတ်လုပ်တဲ့
ပုံမှန်အားဖြင့်အမွေးစားစောင့်ရှောက်မှုမှတဆင့်အကူးအပြောင်းအတွက်ဖြစ်အံ့သောငှါ cues ဖွံ့ဖြိုးဆဲများအတွက်
အိမ်မှာပတ်ဝန်းကျင်၏ nontraditional အမျိုးအစား
uh ... ဒါကိုက်ညီမှုကြောင်းကိုမွေးစားမိဘများလုပ်နိုင်ကြောင်းအရာတစ်ခုခုသည်
ကျိန်းသေ ပတ်သက်. ပြောဆိုရန်ပြုပါ
uh ... ဒါဥပမာတစ်ခုကဲ့သို့နံနက်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ဖြစ်လိမ့်မယ်
တစ် set ကိုအချိန်အားဖြင့်
တခါတရံ uh ... အထူးသဖြင့်အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ၏လေးတွေနှင့်အတူ
ဒါကြောင့်တစ်ဦးရူပါရုံကိုဖန်တီးရန် Bob လိုအပ်သောဖြစ်စေခြင်းငှါ,
uh ... တချို့ orch ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်ခိုင်လမ်းမှဖြစ်ပါသည်
အွမ် ... အအထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာရောင်စဉ်အပေါ်လေးတွေမပါဘဲဒါနှင့်အတူ
အွမ် ... အမြင်အာရုံအဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်မောင်းသောအထည်ကို
uh ၏ ...
uh ... အိမ်တယောက်အား Autism ၏ဝိသေသလက္ခဏာများဖြစ်ကြသည်၏မရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်
ငွငျး contactus သောသူတို့သည်လည်းထိုညွှန်းကိန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်
အောက်ပါ carryout မှ
uh ... ပြန်လေ့လာသင်ယူမှု့ကြင်နာအကြောင်း, ငါ့ကနဦးထင်မြင်ချက်ပေးရန်
နှင့် AIT အတိအကျကြောင့်ထို့နောက်အခြားဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာကိုနားမလည်ကြဘူး
ကိုယ့်ကြောင့်နို့ထွက်ပစ္စည်းရှစ် uh သောဆိုလိုသည်ထင် ...
ကျနော်တို့အအထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာရောင်စဉ်ကိုစဉ်းစားသောအရာကို uh ရှိပါတယ် ... မျိုးစုံကို
uh ၏ ... အရောင်စဉ်နှင့်ဒါထီးအောက်၏အမြိုးမြိုး၏ထီး
နှုန်းထားများရောဂါ ... uh ဖြစ်ပါသည်
ကျွန်တော်တို့အား Autism ၏ကုန်ကျစရိတ်သည်အတိအကျဘာမသိရပါဘူးအမည်မသိအကြောင်းပြချက်
uh ... တစ်ဦးအမြန်၌သင်တို့ကိုပြောနေနေ
ဒါပေမဲ့ uh ...
uh ... ငါတို့သည်လည်းသောပြင်းထန်မှုအဆင့်အထိပြင်းထန်မှုအကြောင်းပြောဆိုရန်ရှိသည်
uh ... အရပ်၌ရှိအချို့သောဆက်သွယ်ရေးစေခြင်းငှါသူတို့၏အမူအကျင့်စီမံခန့်ခွဲနိုင်
uh ... မှာအားလုံးမည်သည့်ဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှုများရှိသည်မဟုတ်စေခြင်းငှါ
ပုံမှန်အားတစ်ဦး atypical ၏ uh ... သူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်
သူတို့၏စိတ်ထဲတွင် process ကို input ကိုသင်တို့အားလမ်းမှဒါကွဲပြားခြားနားသောသောလမ်း
သငျသညျသူတို့အလွန်ပြင်းထန်သောကြောင့်ကောင်းသောတုံ့ပြန်မှုကို process ရန်ခက်ခဲအချိန်သိ
uh ... ရှိများနှင့်စတင်ရှိပါတယ်
ဒါကြောင့်အဘယျသို့သောဤအခြားမမှန်အလေးချိန်၏အချို့သောအကြောင်းတစ်ဦးအား Autism ၏ကြင်နာင်
uh ... uh ၏အခြားအမျိုးအစားများနှင့်အတူ ...
ဥပမာအားရှစ်ဆယ်မြင်းကောင်ရေ coexisting ရှိသည်နှင့်ဒါကြောင့်သင်ကအရမ်းစွပ်စွဲကြပါပြီစေခြင်းငှါ,
uh ဖို့ ... အာရုံစူးစိုက်မှုဆပ်ဖို့ရန်
ဒါကြောင့်ကိုယ့်တစ်ဦးအလွန်ရှုပ်ထွေးတဲ့ comp င်ဒီတော့သူတို့အမှုအရာသည်လည်းအထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာနှင့်အတူအတူတကွနိုင်
သင်သည်လည်းကျန်းမာရေးကိုအခွအေန coexisting ရှိသည်ဟုနိုင်
ပန်းနာရောဂါသို့မဟုတ် uh ၏အချို့ကိုအခြားအမျိုးအစား ... နာတာရှည်ကျန်းမာရေးအခြေအနေနှင့်ဒါ
ဒီ uh ... ကအများကြီးပိုရှုပ်ထွေးပြီးညာဘက်
ကဖမ်းရန်စုံလင်သောအချိန်သင်ရုံကိုယ့်ရဲ့စဉ်းစား yast ထွက်ရှာတွေ့မှသတိထားမိ
ဆန်းစစ်သုံးသပ်ခြင်းပြုမိပြီးနောက်အစီအစဉ်အပေါ် ana စတင်ရ
uh ... ကလေးချိတ်ဆက်ရနိုင်
သင့်လျော်သော uh ... ပြရောဂါရှာဖွေရေးအဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု
ဒါကြောင့် nificantly သက်ရောက်မှုင်
uh ... သင်ရှာနေသောအဖြေကိုရဖို့မနေလျှင်
သင့်ရဲ့ကလေးအထူးကုဆရာတစ်ဦးကဒုတိယထင်မြင်ချက်တစ်ဦး၏ထို option ကိုစူးစမ်းနှင့်အတူ
Iowa့mom, ငျ့အိမျတျောအားပွနျပွောနှငျ့သငျ uh ရှိ ... မိခင်ဗီဇအခါ,
uh ... by
တနင်္ဂနွေရဲ့သငျသညျပုံမှန်အားဖြင့် CV လို၏နောက်ကျောဒါတစ်ဦးချင်းစီအပေါ်
နှစ်ဆယ်မှဆယ်ရှစ်ယောက်အကြောင်းကို uh ... ၏သားတို့ယူဆချက်
uh ... အသွင်ပြင်လက္ခဏာများအချို့ကိုအလွန်အရေးကြီးပါသည်
တစ်ခုခုကို uh နှင့်အတူတက်လိုက်လျှောက်ရန် ...
ရောဂါရှာဖွေရေးပတ်ပတ်လည်သတင်းအချက်အလက်နှင့် uh ... ကိုယ့်ဆက်ဆက်အချို့နှင့်တကွသင်ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်
uh ... လူထုအခြေပြုသယံဇာတများကြောင့်မိသားစုဘက်
uh ရောဂါရှာဖွေရေးအဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ကိုပြုရ access လုပ်နိုင် ... ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစိစစ်
ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူတို့အားသယံဇာတများ post နိုင်လျှင်ယခုကြီးမြတ်ပါလိမ့်မယ်
အွမ် ... ကိုယ့်သင်တို့အဘို့အကွောငျးအခြားမေးခွန်းတစ်ခုမှာမြျှောလငျ့၏ sort ဖို့ပြောပြတယ်
အချိန်ကိုဘောင်အွမ် ... သူတို့အချို့သောစိန်ခေါ်မှုများသတိပြုမိတိုက်ပွဲများနှင့်ကိုယ့်အကြှနျုပျမှသှားလြှငျဒါ
ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖွင့်မဟုတ်လျှင်အစားကလက်မှုအစားက Agnes အချို့ကိုအခြားအမျိုးအစားင်
uh ... ရောဂါပိုပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာသည်
uh ... စိစစ်ဘို့
နှင့်တစ်ဦးကျွန်တော်တို့ရဲ့ uh အချို့ကိုစတင်ခံနေရတက်အတိုင်းလိုက်နာ ...
uh ... အ u_s_s_ အစောပိုင်းခြေလှမ်းအစီအစဉ်သူတို့တစ်တွေလေးဆယ်ငါးယောက်ရှိ
uh ... နှစျနှစျ
uh ... တစ်ဦးစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစိုးရိမ်စရာရှိ၏
ထိုအခြိနျ မှစ. ကြောင်း
ကအလုပ်အကိုင်အဘို့နေ့ရက် turnaround ပြတင်းပေါက်
ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြောင်း၏အမူအကျင့်လေ့လာဆန်းစစ်နှင့်အတူမည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုအလုပ်လုပ်တဲ့ Beaver အဘိဓါန်အကဲဖြတ်င်
uh ... တစ်ဦးတစ်ဦးအတွင်းအကြံပြုအကောင်အထည်ဖော်
uh ... ရောဂါရှာဖွေ uh အချို့ကိုအမျိုးအစား ...
အကြံပြုချက်များ VP ထွက်သတ်မှတ်ထား
န်ဆောင်မှု uh ... မိသားစုများန်ဆောင်မှုချိတ်ဆက်ခံရ
သငျသညျဈကျနော်တို့အလေးချိန်ရှိလုပ်နေသင့်ပါတယ်အများကြီးအမှီ ပြု. အဘယျသို့မသေချာဘူးသိ
သင်၏ကြည့်ရှုသူများကိုတကယ်ကြင်နာ၏အဘို့စောင့်ရှောက်မှု၏ system ကိုတစ်ဦးတစ်ဦးနားလည်မှုကိုရရှိရန်
တစ်ဦး uh ... အစောပိုင်းခြေလှမ်းအစီအစဉ်ရှိကွောငျး
အွမ် ... ပြည်နယ်အနှံ့ဒါ
နေသမျှကာလပတ်လုံးသူတို့သုံးနှစ်အောက်အသက်အနှစ်င်အဖြစ်သူတို့ access လုပ်နိုင်
ကိုယ့်ကိုကိုယ်အဆင်ပြေအလွန်ကြီးကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ဈ uh ပဲဟုတ်ကဲ့တတ်နိုင်သမျှအင်တာနက်အပေါ်က ...
အွမ် ... အစောပိုင်းအစီအစဉ်
သင့် local ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့သည်၎င်း၏အစီအစဉ်နှင့်အတူ
မိဘကနေကြောင်းတောင်းဆိုမှု မှလွဲ. နှင့်ကမှလာရန်မလိုအပ်ပါဘူးရပ်တန့်
သူတို့၏ပြက္ခဒိန်များနှင့်မွေးစားစောင့်ရှောက်မှုလျှင် uh ...
ကလေးဆယ်ငါးအတွင်း ... uh အကဲဖြတ်ခံရဖို့ကကလေးများအတွက်စွမ်းရည်
အွမ်လည်းသက်သက် ... hillsborough ခရိုင်အတွင်းရှိဒေသခံများ၏ u_s_ မှာ
ကျွန်တော်တို့ပြီးသားဖြစ်အံ့သောငှါလေးတွေသကဲ့သို့ကောင်းစွာတစ် uh ... ရောဂါရှာဖွေဆေးခန်းလည်းရှိ
အွမ် ... ရေခဲဆေးခန်း
အွမ် ... နှင့်အရေအတွက်ကြောင်းဆေးခန်းနှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့သင့်ရဲ့ u_s_f_ တယ်
စည်းကမ်းချက် amortize နှင့်လို
uh ... အအထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာရောဂါ
တစ်ဦးလည်းမရှိသည့်စီးပွားရေးတစ်ခု statewide အေဂျင်စီ com ၎င်းတို့၏ဒေသဆိုင်ရာအေဂျင်စီဒေသခံဖြစ်ပါတယ်
uh ၏ ... အဲဒီအချို့ကိုအတွက်ရှိပါကသင်၏ဒေသဆိုင်ရာဧရိယာ၌ entity ပြ
ကနဦးစိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့် uh ...
သငျသညျ uh ရုံသိ ...
နှင့် uh ...
ဤအချက်အလက်သည်သင်တို့ကိုကျေးဇူးတင်ကောင်းစွာကျွန်တော်တို့ပိုစတာ com ကိုသင့်မှာ့ဘာဂန်င်
ကျနော်တို့့ post ကိုနေဒါကြောင့်သင်ကတ်ကိုနှင့်အတူအချို့သောအံ့သြဖွယ်လေ့ကျင့်ရေးအရင်းအမြစ်များကိုရရှိပါသည်
ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုဖြစ်ကြောင်းဒီတဆယ်ရောင်းချလိမ့်မည် access လုပ်နိုင်
နှင့် ... အပြ uh အထွက်ရောက်ရှိနှင့်သင်တို့၏သားသမီးရနိုင်ခဲ့ကြတယ်နှင့်
ဖလိုရီဒါနှင့်အတူ luncheonette အကြောင်းကိုအခြားဇာတ်လမ်းတွဲသည်ကျွန်တော်တို့ကိုပူးပေါင်းဘို့သင့်